Nihalehibe tao Amin’ny Tranolay i Samoela | Tena Finoana
Nanompo An’i Jehovah Foana Izy
1, 2. a) Oviana ary taiza i Samoela no namory ny vahoaka? b) Nahoana izy ireo no nila nampiana mba hibebaka?
MAIN-TANY tamin’izay, satria volana Mey na Jona, ary efa masaka hojinjaina ny vary. Efa antitra i Samoela, ary efa ela izy no mpaminany sy mpitsara ny Israely. Novoriny tao Gilgala ny vahoaka satria nanao ratsy. Nijery azy ireo i Samoela sady niasa saina hoe ahoana no hanohinana ny fon’izy ireo. Izy rehetra kosa gina tsy nahateny.
2 Tsy tsapan’izy ireo hoe tsy nety mihitsy ny nataony. Nangataka mpanjaka olombelona mantsy ry zareo. I Jehovah anefa no efa Mpanjakany. Tena tsy nanaja an’i Jehovah àry izy ireo, sady tsy nanaja ny mpaminaniny. Ahoana no hanampian’i Samoela azy ireo hibebaka?
Modely ho antsika i Samoela satria niezaka nanana finoana matanjaka, na dia nanao ratsy aza ny olon-kafa
3, 4. a) Nahoana i Samoela no tsy nanadino ny fahazazany? b) Nahoana no mahasoa antsika ny mandinika ny tantaran’i Samoela?
3 Niteny aloha i Samoela hoe: ‘Efa antitra sy fotsy volo aho.’ Hihaino azy kokoa ny olona amin’izay. Hoy izy avy eo: “Izaho efa nanompo an’Andriamanitra sy nitarika anareo, hatramin’ny fahazazako ka mandraka androany.” (1 Sam. 11:14, 15; 12:2) Na efa antitra aza i Samoela, dia tsy hadinony mihitsy ny fahazazany. Nahoana? Satria efa tamin’izany izy no nanapa-kevitra hoe tsy hivadika amin’i Jehovah mihitsy, ka lasa tena nino azy sy nahafoy tena ho azy nandritra ny androm-piainany.
4 Niezaka nanatanjaka ny finoany foana i Samoela, na dia tsy nanam-pinoana sy nivadika tamin’i Jehovah aza ny olona nanodidina azy. Sarotra koa ankehitriny ny manana finoana matanjaka, satria ratsy toetra sy tsy manam-pinoana ny olona manodidina antsika. (Vakio ny Lioka 18:8.) Andao àry isika handinika ny tantaran’i Samoela hatramin’ny fahazazany.
‘Nanompo teo anatrehan’i Jehovah i Samoela zaza’
5, 6. Nahoana i Samoela no tsy toy ny ankizy rehetra, ary nahoana ny ray aman-dreniny no natoky hoe ho voakarakara tsara izy?
5 Tsy toy ny ankizy rehetra i Samoela. Vao nisara-nono mantsy izy, tamin’izy telo taona na maherin’izay, dia efa nanompo tao amin’ny tranolain’i Jehovah tany Silo. Maherin’ny 30 kilaometatra avy tao Rama, tanàna niaviany, izy io. Nomen’i Elkana sy Hana ho an’i Jehovah izy mba hanompo azy. Fanompoana hafakely anefa ilay izy, satria ho Nazirita mandritra ny androm-piainany izy. * Fa angaha tsy tia azy ny ray aman-dreniny, no dia nanary azy?
6 Tsy izany mihitsy! Fantatr’izy ireo fa ho voakarakara tsara ny zanany. Teo foana mantsy i Ely Mpisoronabe, ary niara-niasa taminy i Samoela. Nisy vehivavy maromaro koa niasa tao Silo, ary voalamina tsara ny zava-drehetra tao.—Eks. 38:8; Mpits. 11:34-40.
7, 8. a) Inona no nataon’i Hana sy Elkana, isan-taona? b) Nahoana izy ireo no modely ho an’ny ray aman-dreny?
7 Tsy hadinon’i Hana sy Elkana mihitsy koa i Samoela satria zanany voalohany sady valim-bavaka. Nangataka zanakalahy mantsy i Hana sady nivoady fa homeny an’i Jehovah izy io. Nitsidika azy izy mivady isan-taona, ary nitondran’i Hana akanjo kely izy mba hoentiny miasa. Azo inoana fa faly erỳ i Samoela. Nahatsiaro ho sambatra izy nanana ray aman-dreny tia sy nampahery azy. Nampianarin’izy ireo azy fa toerana miavaka ny tranolay masina, ary tena tombontsoa ny manompo ao.
8 Ray aman-dreny maro no tsy mampianatra ny zanany momba an’Andriamanitra, na dia miezaka mafy mamelona sy mikarakara azy ireo aza. I Hana sy Elkana kosa tena modely ho an’ny ray aman-dreny. Izay hahatonga ny zanany hifandray amin’i Jehovah no zava-dehibe taminy, ka tsy mahagaga raha hendry i Samoela rehefa lehibe.—Vakio ny Ohabolana 22:6.
9, 10. a) Hoatran’ny ahoana ilay tranolay masina, ary inona no tsapan’i Samoela rehefa nijery azy io sy nanompo tao? (Jereo koa ny fanamarihana ambany pejy.) b) Inona avy ny asan’i Samoela, ary inona no azon’ny ankizy sy ny tanora atao mba hanahafana azy?
9 Alao sary an-tsaina hoe iny i Samoela kely fa nandehandeha teny amin’ireo havoana teny akaikin’i Silo. Avy eny izy no nitazana an’ilay tanàna sy ny lohasaha erỳ ambany. Azo inoana fa faly erỳ izy nahita ny tranolay masin’i Jehovah! * Efa ho 400 taona ilay izy no naorina, ary i Mosesy no niandraikitra izany. Io irery no foiben’ny fivavahana marina tamin’izany.
10 Vao mainka tian’i Samoela ny nanompo tao amin’ny tranolay. Hoy ny 1 Samoela 2:18: ‘Nanompo teo anatrehan’i Jehovah i Samoela. Mbola zaza izy tamin’izay, ary nanao efoda rongony izay nisy fehikibo nafatotra taminy.’ Nanampy ny mpisorona izy, matoa nanao efoda. Akanjo tsotsotra ilay izy ary tsy misy tanany. Tsy taranaky ny mpisorona izy, nefa anisan’ny asany isa-maraina ny nanokatra ny varavaran’ireo trano teo an-tokotanin’ny tranolay sy nikarakara an’i Ely, izay efa be taona. Sahiran-tsaina anefa i Samoela kely. Nisy zava-dratsy nitranga mantsy tao amin’ny tranolay masina.
Tsy voatarika hanao ratsy mihitsy
11, 12. a) Inona no nahatonga an’i Hofinia sy Finehasa hanao fahotana maro? b) Inona ny zava-dratsy nataon’izy ireo tao amin’ny tranolay masina? (Jereo koa ny fanamarihana ambany pejy.)
11 Mbola kely i Samoela dia efa nahita olona nanao zavatra tena ratsy. Tsy iza izany fa i Hofinia sy Finehasa, zanak’i Ely. Hoy ny 1 Samoela 2:12: “Ny zanakalahin’i Ely dia olona tsy manjary, sady tsy niraharaha an’i Jehovah.” Matoa àry izy ireo lasa “olona tsy manjary”, izany hoe tsy misy ilana azy, dia satria “tsy niraharaha an’i Jehovah.” Tsy te hahalala ny didiny sy ny toro lalany izy ireo, ka lasa nanao fahotana maro.
12 Voalaza tsara ao amin’ny Lalàna ny asan’ny mpisorona sy izay tokony hataony rehefa manao fanatitra. Mifanitsy amin’ny vidim-panavotana mantsy ireny fanatitra ireny. Nataon’i Jehovah izy io mba hamelana ny heloky ny olona, amin’izay izy ireo ankasitrahany sy tahiny. Nitarika ny mpisorona hafa hanao tsinontsinona ny fanatitra anefa i Hofinia sy Finehasa. *
13, 14. a) Inona ny vokatry ny nataon’ireo mpisorona teo amin’ny olona? b) Nahavita ny andraikitry ny ray sy ny an’ny mpisoronabe ve i Ely? Hazavao.
13 Alao sary an-tsaina ange i Samoela kely nahita an’izany zava-dratsy rehetra izany e! Sady amin’izay tsy voasazy akory ireo nanao an’ilay izy. Firifiry moa ny olona hitany nankeo amin’ny tranolay, nanantena mba hahazo fampaherezana nefa avy eo diso fanantenana sy tafintohina? Nisy tamin’ireny aza olona mahantra sy niharan’ny tsy rariny, nefa vao mainka natao tsinontsinona. Ary inona no tsapany rehefa fantany fa nandika ny lalàn’i Jehovah hafa koa i Hofinia sy Finehasa, satria nanao firaisana tamin’ny vehivavy sasany nanompo tao amin’ny tranolay? (1 Sam. 2:22) Nanantena angamba izy hoe hanitsy an’izany i Ely.
Sahiran-tsaina be i Samoela rehefa nahita ny zava-dratsy nataon’ny zanak’i Ely
14 I Ely tokoa no tena afaka namaha ilay olana. Mpisoronabe izy ka adidiny ny mijery sao misy zavatra tsy mety ao amin’ny tranolay. Raim-pianakaviana koa izy, ka tokony hanitsy ny zanany. Sady nampahory olona mantsy izy roa lahy, no ho voan’ny nataony koa. Samy tsy nataon’i Ely anefa na ny andraikitry ny ray na ny an’ny mpisoronabe! Nobedesiny kely fotsiny ny zanany. (Vakio ny 1 Samoela 2:23-25.) Nila nofaizina mafy anefa izy ireo, ary mendrika ny ho faty mihitsy!
15. Inona ny didim-pitsarana nolazain’i Jehovah tamin’i Ely, ary nampiova azy mianakavy ve ilay izy?
15 Tafahoatra loatra ilay olana, ka naniraka “lehilahin’Andriamanitra” na mpaminany i Jehovah, mba hanambara didim-pitsarana henjana tamin’i Ely. Hoy i Jehovah: ‘Ianao manome voninahitra foana ny zanakao mihoatra noho izaho.’ Nilaza àry Andriamanitra fa hiara-maty izy roa lahy zanak’i Ely, hijaly ny fianakaviany, ary tsy havela hanao ny asan’ny mpisorona intsony. Tsy nampiova an’ireo mpanao ratsy anefa izany fanamelohana mafy izany.—1 Sam. 2:27–3:1.
16. a) Inona no lazain’ny Baiboly momba an’i Samoela? b) Mampahery anao ve izany? Nahoana?
16 Nisy vokany ratsy teo amin’i Samoela ve izany rehetra izany? Marina fa mampalahelo ilay tantara, nefa ny mahafaly dia hoe nanao ny tsara foana izy sady nihamatotra. ‘Nanompo teo anatrehan’i Jehovah i Samoela zaza’, araka ny 1 Samoela 2:18. Mbola kely izy nefa nifantoka tamin’ny fanompoana. Milaza mihitsy ny andininy faha-21 fa ‘nihalehibe teo anatrehan’i Jehovah izy’, izany hoe vao mainka nifandray tsara taminy. Ny fifandraisana akaiky amin’i Jehovah tokoa no tena miaro antsika tsy hanao ratsy!
17, 18. a) Ahoana no azon’ny tanora anahafana an’i Samoela? b) Nandray soa ve i Samoela rehefa nanao ny tsara? Hazavao.
17 Azon’i Samoela natao ny niteny hoe: ‘Ny mpisoronabe sy ny zanany aza manao zava-dratsy, ka afaka manao izay tiako koa aho.’ Tsy hoe rehefa manao ratsy anefa ny hafa, indrindra fa ireo manana fahefana, dia tsy mampaninona raha manao ratsy koa isika. Tanora kristianina maro no manahaka an’i Samoela, ka ‘mihalehibe eo anatrehan’i Jehovah’, na dia manao ratsy aza ny manodidina azy.
18 Nandray soa ve i Samoela rehefa nanao ny tsara? Hoy ny Baiboly: “Nihalehibe ihany i Samoela nandritra izany fotoana izany, sady vao mainka nahatehotia teo imason’i Jehovah sy teo imason’ny olona.” (1 Sam. 2:26) Nisy tia an’i Samoela tokoa àry. Tsy ny olona fotsiny no tia azy noho izy tsy nivadika fa i Jehovah koa. Ary izay no tena zava-dehibe. Fantany fa hanitsy an’izay tsy nety rehetra tao Silo Andriamanitra. Lasa anefa ny sainy hoe: ‘Mba rahoviana àry?’ Voavaly ihany izay fanontaniany izay, indray alina.
“Mitenena fa mihaino ny mpanomponao”
19, 20. a) Inona no nitranga indray maraina be? b) Ahoana no nahafantaran’i Samoela hoe iza ilay niantso azy? d) Inona no nataon’i Samoela na dia tena ratsy aza ny nataon’i Ely?
19 Efa nadiva haraina tamin’izay nefa mbola maizina, ary nitsilopilopy ny jiro lehiben’ny tranolay. Nangina ny manodidina. Nandre feo niantso azy anefa i Samoela ka noheveriny fa i Ely. Efa antitra be sady pahina i Ely tamin’izay. “Nihazakazaka” nankany i Samoela. Azonao an-tsaina ve hoe iny ilay zaza mihazakazaka tsy mikiraro, hanontany izay ilain’i Ely? Tena tsara fanahy sy nanaja an’i Ely foana i Samoela. Mbola mpisoronaben’i Jehovah mantsy izy, na dia tena ratsy aza ny nataony.—1 Sam. 3:2-5.
20 Namoha an’i Ely i Samoela sady hoy izy: “Intỳ aho, fa niantso ahy ianao.” Nilaza anefa i Ely fa tsy niantso, ary nasainy natory izy. Mbola niverina indroa anefa izany, ka azon’i Ely hoe i Jehovah ilay niantso. Efa ela no tsy dia nisy fahitana na faminaniana avy amin’i Jehovah intsony, ary tsy mahagaga izany. Izao indray izy vao miteny, sady amin’izay amin’ilay zazalahikely! Nasain’i Ely natory àry i Samoela, sady natorony azy izay tokony havaly rehefa misy miantso indray. Nankatò i Samoela. Henony indray avy eo ilay feo niantso hoe “Samoela! Samoela!”, ka hoy izy: “Mitenena fa mihaino ny mpanomponao.”—1 Sam. 3:1, 5-10.
21. Ahoana no hihainoantsika ny feon’i Jehovah ankehitriny, ary inona ny soa ho azontsika raha manao izany?
21 Ela ny ela ka nisy mpanompo nihaino an’i Jehovah tao Silo. Nihaino azy foana i Samoela nandritra ny androm-piainany. Ary ianao? Marina fa tsy hisy feo avy any an-danitra hiantso anao. Azo lazaina hoe henontsika foana anefa ny feon’Andriamanitra, ao amin’ny Baiboly. Toa an’i Samoela, dia hitombo ny finoantsika arakaraka ny hihainoantsika an’i Jehovah sy hanarahantsika ny teniny.
Na natahotra aza i Samoela, dia nolazainy tamin’i Ely daholo ny didim-pitsaran’i Jehovah
22, 23. a) Ahoana no nahatanterahan’ilay didim-pitsaran’i Jehovah? b) Inona no niharihary momba an’i Samoela?
22 Niavaka tokoa iny alina iny ho an’i Samoela. Nanjary hafa tanteraka mantsy ny fifandraisany tamin’i Jehovah, satria lasa mpaminaniny sy mpitondra teniny izy. Natahotra ny hilaza ny hafatr’i Jehovah tamin’i Ely izy tamin’ny voalohany. Tamin’io mantsy i Jehovah no niteny farany hoe hampiharina amin’izay ilay sazy ho an’ny fianakavian’i Ely. Nataon’i Samoela àry izay hananana herim-po, ka nolazainy ilay didim-pitsarana. Nanetry tena i Ely ka nanaiky izany. Tsy ela dia tanteraka daholo izay nolazain’i Jehovah. Niady tamin’ny Filistinina ny Israely, ka niara-maty i Hofinia sy Finehasa. Maty koa i Ely rehefa nandre fa lasa babo ny Vata masin’i Jehovah.—1 Sam. 3:10-18; 4:1-18.
23 Vao mainka niharihary tatỳ aoriana fa mpaminany azo atokisana i Samoela. Milaza ny Baiboly fa “nomba azy i Jehovah”, ary notanterahiny ny faminaniana rehetra nolazain’i Samoela.—Vakio ny 1 Samoela 3:19.
“Niantso an’i Jehovah i Samoela”
24. Inona no nangatahin’ny Israelita, ary nahoana izany no fahotana lehibe?
24 Nanahaka an’i Samoela ve ny Israelita, ka nankatò an’i Jehovah sy tsy nivadika? Tsia. Nangataka mpanjaka olombelona izy ireo satria te hitovy tamin’ny firenen-kafa, fa tsy tiany hoe mpaminany fotsiny no hitsara azy. Nasain’i Jehovah nanaiky i Samoela. Tsy maintsy nampahafantarina azy ireo anefa fa fahotana lehibe ilay izy. I Jehovah mihitsy mantsy no nolavin’izy ireo tsy ho mpanjaka! Novorin’i Samoela tao Gilgala àry ny vahoaka.
Nivavaka tamin’ny fony i Samoela, ary namaly azy i Jehovah ka nandefa kotroka sy orana
25, 26. Inona no nataon’i Samoela mba hahatsapan’ny olona fa nanao fahotana lehibe izy ireo?
25 Gina tsy nahateny ny rehetra, araka ny efa hitantsika. Nampahatsiahivin’i Samoela azy ireo fa tsy nivadika mihitsy izy, hatramin’izao izy antitra izao. “Niantso an’i Jehovah i Samoela” avy eo, mba handatsaka kotroka sy orana.—1 Sam. 12:17, 18.
26 Tsy fahita mihitsy izany kotroka sy orana amin’ny main-tany izany! Raha nisy olona tsy nino na naneso tamin’izay, dia tampina ny vavany satria feno rahona tampoka ny lanitra. Nifofofofo ny rivotra, ka folaka ny vary teny an-tsaha. Nirefotra be ny kotroka, ary latsaka ny orana. Inona no vokatr’izany? “Natahotra mafy an’i Jehovah sy Samoela” ny olona. Izay izy ireo vao tonga saina hoe nanao fahotana lehibe!—1 Sam. 12:18, 19.
27. Inona no fitahiana homen’i Jehovah an’izay manam-pinoana toa an’i Samoela?
27 I Jehovah mihitsy teo no nanohina ny fon’ireo mpikomy ireo, fa tsy i Samoela. Nanam-pinoana foana i Samoela, nandritra ny fahazazany ka hatramin’izy efa antitra. Namaly soa azy àry i Jehovah. Mbola tsy miova i Jehovah hatramin’izao, fa manampy an’izay manam-pinoana toa an’i Samoela.
^ feh. 5 Ny Nazirita dia olona manao voady, ohatra hoe hifady divay sy tsy hanapa-bolo. Tsy ela be ny ankamaroany no manao Nazirita. Nisy ihany anefa Nazirita mandra-pahafatiny, toa an’i Samsona sy Samoela ary Jaona Mpanao Batisa.
^ feh. 9 Tranolay lehibe izy io, ary mahitsizoro. Hazo maromaro no narafitra mba hampitsangana azy. Akora tena tsara no nanaovana azy, toy ny hoditra faoky, lamba misy peta-kofehy tsara tarehy, ary hazo lafo vidy nasiana volamena sy volafotsy. Mahitsizoro koa ny tokotaniny, ary nisy alitara lehibe fanaovana sorona. Nasiana efitrano hafa ho an’ny mpisorona teny amin’ny sisin’ny tranolay, tatỳ aoriana. Tao amin’ny iray amin’ireny angamba i Samoela no natory.
^ feh. 12 Zavatra roa no resahin’ilay tantara: Voalohany, efa voalazan’ny Lalàna hoe inona amin’ilay biby hatao sorona no azon’ny mpisorona nohanina. (Deot. 18:3) Ireo mpisorona ratsy fanahy kosa naniraka mpanompo mba haka an’izay hena tsaratsara tao anaty vilany, raha mbola nampangotrahina ilay izy. Faharoa, rehefa nisy olona nitondra fanatitra hodorana teo amin’ny alitara, dia nirahin’ireo mpisorona ny mpanompony haka an-keriny amin’ilay hena manta. Mbola tsy nodorana ho an’i Jehovah akory anefa ny tavin’ilay izy.—Lev. 3:3-5; 1 Sam. 2:13-17.
Inona no nahatonga an’i Samoela hanana finoana matanjaka, tamin’izy mbola kely?
Nahoana izy no tsy voatarika hanao ratsy?
Nahoana izy no nahavita nilaza ny didim-pitsaran’Andriamanitra?
Hizara Hizara Nanompo An’i Jehovah Foana Izy